IFTIINKACUSUB.COM: Waanu colownay aniga iyo Sanadkii Cusbaa!!
Wakhtiyadii hore sanadku isaga ayaa iga caqli badiyay ,sababta oo ah intaan soo jirayba waa uun aan u dabaal degaayay,hada ayuunbaan xasuustay kadibna waxa aan iswaydiiyay,sanadkasta waad dabaal degtaa ,horta maxay aya kasoo galo dabaal degiisa, maxaadse ku qabtaa faa'iido iyo khaasaare.
Xisaab ayuunbaan isku dhuftay ,waalaahi jeexba igama joogo ,oo halkuu isagu iiga dabaal degi lahaa sanadku , ayuunbaan anigu u dabaal degaayay ,ilayn aniga ayuunbaa jibaysane, waxay ahayd in uu isagu ii dabaal dego, sababta oo ah isaga ayaa Sanadku aniga wax igu qaba ,aniguse waxaan gabaw ii ii kordhiyo mooyaane wax anfaca kuma qabo.
Marka aan maqlo sanad cusub waxaa markiiba maskaxdayda aan ka sawirtaa in uu yahay mid igu soo duulay weerarna ku haya jiritaanka cimrigayga ,doonayana in uu halkii uu cimrigayga iyo Gu'gaygu taagnaa in uu ka qaado,kaasi oo markasta ii horseedaaya in aan sii gaboobo.
Hadaba madamaa aanan aniga iyo dadkuba aanaan jeclayn in sanadkastaa noloshayada uu gaboy iyo geeri uu kusii dhaweeyo,su'aasha meesha ku jirtaa waxa ay tahay,maxaa loo baahan yahay in lagaga hortago Sanadahan faraha badan ee midba uu mid kuu dhiibaayo.